आहा !! यस्तो छ बर्माको नेपाली गाउँ, यति राम्रा छन नेपाली युवतीहरु, भिडियो हेर्नुहोस – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/आहा !! यस्तो छ बर्माको नेपाली गाउँ, यति राम्रा छन नेपाली युवतीहरु, भिडियो हेर्नुहोस
आहा !! यस्तो छ बर्माको नेपाली गाउँ, यति राम्रा छन नेपाली युवतीहरु, myanmar in nepali , भिडियो तल हेर्नुहोस
याे समचार पनि पढ्नुहोस् अभिनेता सोनु सुद सन् २०२० देखि लगातार मानिसहरुको सहयोगमा अगाडि देखिने गरेका छन् । आफ्ना अगाडि कसैले केही समस्या राख्यो कि उनी उक्त समस्या समाधान गरिदिन्छन् ।सोनुको सहयोग सिलसिला लगातार जारी रहेको छ । अहिले पनि उनको सहयोगको एक भिडियो बाहिर आएको छ । जसमा एक युवकको जागिरका लागि उनले पहल गरेर जागिर पक्का गरिदिएका छन् ।
जब जागिर पक्का हुन्छ । ति युवक सोनुको अगाडि रुन थाल्छन् । ति युवकको यस्तो क्रियाकलाप देखेर सोनु सम्झाउँछन् । भन्छन् ‘नरुनुहोस्, खुसी हुनुहोस् । अब नोकरी भइहाल्यो नि ।’ ति युवक खुसी भएर अभिनेताको खुट्टा समेत छुन्छन् ।
कोरोनाको पहिलो होस् वा अहिलेको दोस्रो लहरको समय सोनु हरहमेसा मानिसको सहयोगमा देखिरहेका छन् । उनले मानिसहरुलाई अक्सिजन, इन्जेक्सन र अस्पतालमा बेड दिलाउन समेत सहयोग गरिरहेका छन् । एक दिन पहिले मात्र उनले आन्द्र प्रदेशमा कुरनुर अक्सिजन प्लान्ट सेट स्थापना गराएका थिए।
अमेरिकामा दुई नेपाली वैज्ञानिकको यस्तो चमत्कार अमेरिकाले गर्यो उच्चवैज्ञानिक पुरस्कारद्धारा सम्मानित !